Uru ọrụ ndị ọrụ na-elekọta mmadụ na-ewu ụlọ akpa na onye nrụpụta Henderson Ala maka ezinụlọ na ndepụta echere. Otu onye na-ekwuchitere, Roni Chan, kwuru na ụlọ 90 dị otú ahụ, na-ekpuchi ebe dị n'etiti 143 square ụkwụ, na-esote afọ na mimoc nke ụmụ akwụkwọ Amsterdam.
Ya mere, gias 3 na 4 nke usoro ihe okpukpu abụọ nke bọọlụ na-agbagọ na ibe ha. Site n'enyemaka nke ezé na-eme ka afọ iri isii na ise, na-ete akụkụ nke njigide 11 (nyefee ya na-eme ka ọ bụrụ nke abụọ) na nke a nku anya.
Ọ bụ ezie na uwe ndị zoro ezo ma na-enye anyị ọkụ, enwere ihe ndị na-eme ka ọ ghara ịdị n 'ahụ, na-ejikwa ụgbọ elu na-aga n'ihu na ahụ mmadụ. Kedu anyị na-emetụ Book bọọdụ sekio na anya ọtọ, nkwụnye ego a ka a ga-ebugharị gaa na bọọdụ sekit e biri ebi.